Ny avelo sy ny ambiroa · L'Homme, son aura et son évolution
> Ny avelo sy ny ambiroa
Classé dans : — cyrius @ 12:55
Ianao sy ny ambiroanao raha matory
LAMOKAM-PATY NY TORIMASO
Io fotsifotsy io ny ambiroanao, toy izao no fahitana anao rehefa manomboka matory, lasa ny ambiroa.
Mankaiza ? Mankany amin’ny fotoana hafa, toeran-kafa, mety ho eto, mety ho any amin’ny tontolo hafa.
Ny fotoana aty tsy fotoana any. Ny anio aty tsy anio any.
Ary io olona hitanao amin’ny nofy io, izay heverinao ho ilay olona eritreretinao io tsy voatery ho izy fa hafa.
Toy ny amin’ny fitiavana ihany e, io ve ilay olona eritreretinao ho manana an’ireo toetra sy fiainana eritreretinao momba azy ?
Tsia matetika, olon-kafa io anananao sary an’eritreritra io ary vatana hafa ilay tiavinao.
toy izany ny any amin’ny tontolon’ny nofy.
Misy fetra nefa ny nofinofy fa tsy maintsy hiverina aty amin’ny tena tontolon’ny nofy ianao, hifoha.
Ary hahalala fa nofy ihany ilay teo, mety ho nofy ratsy, mety ho nofy tsara.
AZO SOLOINA NY LAMBA IRAKOFANA RAHA MATORY
Misy mieritreritra, fa raha soloina ny lamba rakofanao raha matory, metsy hiverina ny ambiroanao,
Tsy marina izany, impiry moa ianao no manipa-damba? Hafa ny lokon’ilay nakipakao, dia hafa no tavela irakofanao eo ?
Impiry ianao no efa natory tsy nirako-damba, dia nisy nandrakotra lamba avy eo ?
Mifoha ihany nefa ianao avy eo, satria ianao ihany ianao fa tsy miova nahisolo lamba injato inarivo aza.
Na te hanohy an’ilay nofy mahafinaritra anao aza ianao tafaverina ety amin’ny tontolon’ny nofo ihany e.
Ny aina na double éterique lasa avelo, mandao ny vatana
NY OLONA MATY SY NY FANAHINY
Toy izao kosa ireo nodimandry, io ny avelo na ny aina, miloko fotsy, handeha izy ary tsy hipody.
Faly izy io handeha, ary faly handray azy koa ny any amin’ny tontolon’ny maty.
Fantany ny azy.
Tsy misy any ny hoe miverena fa sendra anarana mitovy, tsia,
Ny anaranao aty tsy anaranao any, anarana nomen’olombelona ny anaranao aty, hanamora ny fifandraisan’ny samy olombelona.
Mijanona eto ny anaranao.
tsy misy endrika, tsy misy fela-tanana sy « fela-tongotra« ? araka ny « vidéo« etsy abany
Ary io endriny io ihany no hahitana azy any amin’ny tontolon’ny maty
Tsy hisy ho fantatrao akory hoe iza amin’ireo no havanao, mitovy avokoa izy rehetra.
Rantsam-batana 5 avokoa, tsy hita izay lahy na vavy.
Tsy vatana nofo io ka hisy famantarana ny maha lahy na maha vavy.
Io ilay aina nentinao izay lasa avelo rehefa tafasaraka tanteraka amin’ny vatana.
Zavona sy aloka sisa io.
Ary mbola mety ho levona koa amin’ny fotoana iray. Azonao jerena ao amin’ny salamo nosoratan’i Davida izany.
Tsy ny nofo sy io aina io ihany nefa no vatanao, misy vatana hafa koa, izany hoe fanahy hafa, isan’ireo fanahy 7 mahafehy trano mbola ho tavela ary mbola hiverina hitafy nofo, ho teraka indray.
Io ilay tena atao hoe fahaterahana indray na réincarnation.
Ny tenako Cyrius ohatra tsy hafa fa ilay Davida mpanjakan’Israely izay voalazako eo ambony io ihany.
Afaka mankany ianao, mijery toa koa izay efa tany, ary azoko antoka fa efa tany ianao, nefa mety ho voafafan’ny fiainana sy ny tsy fahaiza-manavaka ny tadidinao.
TSY MANDRE MARARY NY AVELO
Esory ao an-tsainao iy sary ity
Tsy misy afo any amin’ny amin’ny tontolon’ny maty, atao inona any afo ?
Tsy misy hahnadro sakafo na hitanina afo any.
Ny hakitroky ny afo dia efa tsy hahafahany miditra any.
Tsy misy olona dorana izany koa any, fa tsy mahalala maharary ireo.
Tsy manana hozatra handre marary izy ireo, fa ilay vatana afaka mandre marary matory tsy mandre na inona na inona intsony any am-pasana.
Tsy marina arak’izany ilay hoe misy fanahy lasa any amin’ny afobe.
Misy biby maintibe koa io amin’ny sary io, toizao no fakantsika sary an-tsaina ny demony.
Ny demony izay tsy misy, ary izaho tsy mbola nahita, ianao koa,
Ny mpandainga sy ny mpamitaka no misy, izay samy isika olombelona ihany.
Vakio ilay pejy hoe NY FANAHY NO OLONA ato dia ho azonao hoe nahoana ianao no azon’ny fakam-panahy hanao zavatra iray.
TSY MISY VALINY VE IZANY NY ATAO
Na izany aza, misy valiny izay rehetra atao, ny asa rehetra mendrika karama, io ilay atao hoe KARMA na tody.
Ny atao rehetra tsy maintsy miverina aminao, anio, mety ho rahampitso, mety ho fotoana hafa.
Raha tsy izany amin’ny fiverenanao eto indray any aorianan’izao ianao izao.
Fikarohana nataon’ny mpanoratra manokana ary afaka avadika ho horonan-tsary fanadihadiana « documentaire« ity pejy ity, manorata aty amiko azafady.